Seeraaf heerri cabee hokkolaa wayiita jirutti murtii dogoggoraa | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ January 5, 2021 January 5, 2021
Rakkoon guddaan dambali’ee dhangala’uun wayiita biyyattii impaayera Itoophiyaa liqimsee jiru keessatti argamna. Qaama Seeraaf Heera irraa tikfamuu male, maqaa jijjiiramaan biyyattii keessatti erga aangoo dhunfatee Seeraaf Heera of jala galchuudhaan akka barbaade godhaa jiru jala jirra. Wayiita olaantummaan seeraa qaamolee biyya bulchaa jirra ofiin jedhaniin cabaa jiru jala jirra. Biyyattii keessatti wanti marti toora isaa gadhiiseera jechuu dandeenya. Qaamoleen bulchiinsaa fi silaa tiksitoota biyyattii kan jedhamanis dirqama isaan irra jiru bahachuu irratti hinargaman. Dirqama ofii bahachuu dadhabuu qaamolee PP irrayyuu, waan isaan hinilaallannee fi hojii seer-maleessummaa wayiita dalagaa jiran keessatti argamna.
Silaa akka maqaa fi gaafatamummaa isaatti qaamni dalagaa isa irraa eegamu bahataa jiru hinjiru. Daranuu hogganootaaf qaamoleen aangoo qaban caasaan PP aangoo dawoo godhachuudhaan uummata meesha maleeyyiitti wayiita irree agarsiisuudhaan miidhaa gurguddaa geessisaa jiran jala jirra. Yakki hammeenyaa ajjeechaa suukanneessaa fi manneen jireenyaa uummataa gubachuu dabalatee qaamolee PP tiin wayiita raawwataa jiru keessatti kan argamnu. Akka ergama isaatti waraanni “Raayyaa Ittisa Biyyaa” jedhamee waamamu daangaa biyyaa kabachiisuu, akka biyyi biraan biyyattii hinweerarreef biyya tiksuu kan ture, as uummata nagaa meesha maleeyyiitti deebi’ee yakka waraanaa wayiita raawwataa jiru keessatti biyyattiin argamti.
Biyyattii keessatti akka Seeraaf Heera biyyattiitti qaamni kamuu mootummaa Mormuuf mirga guutuun nii kennamaaf. Wayiita ammaa wanti ta’aa jiru waraanni biyyattii qaama tokko qofaan PP dhaan dhuunfatamee, humni nageenyaa (Tiki biyyattii) PP dhaan, Manni Seeraaf Manni hidhaas PP dhaan dhaalamuudhaan shira jallataa mormitoota dhaabbilee siyaasaa biroo irratti dalagaa jiran.
Biyyattii keessatti waraana biyyattii irraa hanga manneen seeraa biyyattii keessatti hunde baabsitoota PP ta’uudhaan dirqama isaanii dagatanii faallaa ogummaa isaanii dalaguudhaa wayiita Seeraaf Heerri cabee hokkolu keessatti argamna.
Gaheef dirqama ofii qabu bahachuu hanqatuun qaamolee garaagaraa biyyattii keessatti dalagaa jiraniin yakki hamaan uummata nagaa irratti dalagamaa jira.
Wayiita koree hoji raawwachiiftuun dhaaba ABO osoo hinafin, hogganni gidduu ABO osoo hinafin manneen hiraarsaatti darbatamaniiru. Kan dhaaba siyaasaa KFO illee haaluma wal faakkaatuun raawwatamaa jira.
Ajjeechaa, hiraarsaa, hidhaa fi dararaa saalfachiisaan waan sirna PP mormeef qofa uummata nagaa miskiinota biyyattii irratti adeemaa jira. Dhaabbileen mirga dhala namaaf falman wayiita yakka waraanaa biyyattii keessatti qaama PP tiin raawwatamaa jiru akka dhaabbatiif waywataa jiranitti, wayiita jiruuf jireenyi dhalattoota biyyattii gaddaaf gadadoon guutame keessatti sochiin Boordii filannoo kanneen ofiin jedhan dalagaa jiran nama saalfachiisa.
Kanneenuma har’a maqaa Boordii Filannoo dhahatanii dalagaa jiraniif bor waan saalfachiisaa isaanuu itti qaanfatan akka ta’e himuufiin barbaachisaadha.
Dirqamni Boordii filannoo walaba ta’uudhaan dhimma filannoo irratti dalaguudha. Qaamoleen aangoo biyyattii dhuunfachuuf wal dorgoman marti akka nagaan socho’an, miidhaa akka wal irraan hingeenye ittisuu fi qaama miidhaa geessisu dhimma ilaallatuuf eeruu ture.
Boordiin filannoo gochaa hammeenyaa hogganoota dhaaba siyaasaa karaa seera qabeessaan galmaa’anii hidhamuu fi ajjeefamuu kan dubbatee hinbeekne, dhaabni aangoo biyyattii dhuunfatee jiru yakkaaf hiraarsaa akka irraan hingeenye jedhee takkaa dalagee hinbeekne hojii isa hinilaallanne seenee waliin dhahuu yaaluun ammoo daranuu nama qaanfachiisa.
Boordiin filannoo hoggana dhaaba siyaasaa kamiifuu filuuf aangoo hinqabu. Waa’ee rakkoo dhaaba tokkoo keessaa seenuufis mirga hinqabu. Dirqamaaf aangoo isa hinilaallanne keessa seenee waa’ee rakkoo keessoo ABO irratti murtee kennuuf ifaajuu dhaabuu qaba.
Boordiin filannoo dhaabbilee siyaasaa biyyattii mara ija tokkoon ilaalee kan nageenya filannoof dhaabbatudha malee waa’ee dhaaba tokkoo keessoo isaa ilaalchisee jaarsummaas ta’ee murtii kennuuf gaafatama dhaabichaan alatti tattaaffii taasisuuf mirga hinqabu gahee hojii isaatiis miti.
Waan ta’eef dura Seeraaf Heera cabee hokkolaa jiru dhidhiibee, murtii kennuuf ammoo bu’aa filannoo abdiidhaan eeggatee yeros osoo afaan baafatee wayyaaf. Kana malees wayiita hogganni dhaabbilee siyaasaa hedduun ajjeefamaa fi hidhamanii jiranitti murtii filannoo gaggeessuu dabarsuun kan qaanfachiisaa ta’uu isaa himuun barbaachisaadha.